izinhlelo Ukuthandwa nokuvikeleka iye kokukhulumela phezulu, njengoba kufakazelwa isifiso Abenzi imishini ukuphepha ehlukahlukene futhi sithuthukise iminikelo yabo. Iminyaka engaphezu kweshumi isithakazelo zingancishiswa e video ukubhekwa izinhlelo. Namuhla, bajwayele hhayi kuphela ophethe izakhiwo zebhizinisi kanye nomphakathi, kodwa futhi njengoba isici nokuvikeleka ingqalasizinda ukusebenzisa kwangasese. Ukuqonda lokho izinhlobo amadivaysi kanye CCTV ayatholakala emakethe namuhla, ngeke sikhethe kahle, ngaleyo ndlela bathola isivikelo okuthembekile. idivayisi onobuhle kuhluke ngezindlela eziningi, phakathi lapho ikhwalithi "isithombe", futhi ongakhetha ukuhlela, izindlela wokusebenza.
Analog futhi onobuhle digital
Enye yezinto eziyinhloko ingabe isimiso ngezigaba idatha. amadivaysi eziningi zanamuhla usebenza nsuku digital, kodwa zaqhubeka ukufunwa Analogue onobuhle. Ekusebenteni, ukusetshenziswa kwalezi izinhlobo yembula ngaso linye okuningi. Okokuqala, kufanele sibheke digital ikhamera yevidiyo. Izinhlobo kanye nezici kuleli qembu wehlukile ngempela - ngokwesibonelo, ukuthi kuhlanganisani nokuthi models ezishaywayo-agibele amahhashi, ukuguqulwa high-resolution, futhi emgwaqweni okukuvumela ukuqapha ngesikhathi sangempela futhi ezindaweni eziningi zomhlaba. Ngokuya izici apharathasi ingahluka kwedatha indlela, ukuqopha ubude kanye indlela esilondolozini materials. Analog imodeli lula kakhulu, kodwa ngaphansi sokusebenza. Amadivayisi anjalo zitholwa ngoba okwashiwo endaweni encane. Empeleni, inzuzo enkulu yentengo enjalo kuthenga ongaphakeme, kusukela nemingcele ezisele kodwa ukunqoba ikhamera yedijithali.
Street endlini emakamelweni
Ngokuvamile endaweni ukufakwa imishini kunendima eyinhloko ekukhetheni hlobo locingo. Kuze kube manje, izinhlobo amakhamera ekhaya ukubhekwa uhlelo ethulwa zasendlini, engenantambo, Modular, kanye nezinye izinhlelo. bona zonke sihlanganise usayizi amancane yokuntuleka ukuvikelwa ngokukhethekile emathonyeni angaphandle. Futhi, igumbi amayunithi bathambekele kuhluke kucikelela kancane, izinzwa kungenziwa enikeziwe nge-Wi-Fi kanye imibhobho ngokufanele.
Uma udinga ukwelekelela enxanxatheleni ngaphandle ekamelweni, bese ukhetha ongaphandle okuqapha. Izinhlobo emgwaqweni, esikhundleni salokho, libhekene khona bezinhlamvu zokuzivikela, esivikela idivayisi kusukela frost, amanzi, ilanga kanye ukucindezeleka mechanical. Zingase zibekwe imodeli rotary, inguqulo oluyingungu, kanye izinguqulo lokukhuphula ezishaywayo. Kuye ngokuthi izimo yokusebenza kungase kudingeke futhi ikhamera nge Ukuvikelwa sithuthukiswe - ngezinhloso abakhiqizi anjalo anikeza imishini e izindlu nge bezinhlamvu ocekela phansi-ubufakazi.
Isibonelo ukubhekwa esikhoselweni
"Pin-ihholo" Kuze kube muva nje, ukufunwa CCTV eked imodeli. Amadivayisi anjalo abe lens ukuthi ngokukhethekile ibalwa yokufaka ukucasha. Kodwa namuhla lezi onobuhle kulinganiselwe ukusabalala ukuvinjelwa. Baqala ukwenza umsebenzi miniature ikhamera yevidiyo. Yiziphi izinhlobo ezifihliwe kulesi sigaba ofanele kakhulu emsebentini lotsite - Kufanele sizimisele ngesisekelo indawo kanye ukufakwa izimo. Okubaluleke esiyinhloko siwukuthi izindlu okungase oyindilinga, cylindrical noma isikwele. Isici kwelensi mini-ikhamera ezinjalo, ububanzi okuyinto ingeqi 1 mm. Ngokuvamile, amadivayisi njenge asetshenziswa amakamelo, ukuze bakwazi yabelwe ekhaya noma igumbi amakhamera. Idivayisi ngenxa yobukhulu bayo ezincane kungenziwa bafakwe sekugcineni elingenamikhono, ngokuningiliziwe kwazo ophahleni elingaphakathi noma niche - noma kunjalo, phawula lens kuyoba nzima kakhulu.
Ezezindlu nekhamera Modular
camcorders Iningi namanje ziphakamisa buthule ukufaka, ngakho ubungako bawo ukuba usebenzise izindlu eyizingqabavu futhi ethembekile. Dome, umunwe, unxande ejwayelekile kanye nezinye izinguqulo - Ngakho, lapho kukho okulandelayo ngezinto eziyisisekelo ukubiyela ukuphi. Lezi zinhlobo amakhamera ngokuyinhloko asetshenziswa emgwaqeni, ngoba igumbi akudingekile ukusebenzisa izindlu namandla okuvikela. Naphezu ukubukeka okunesithunzi, ukusebenza imishini okunjalo akukhona kunabayeni izixazululo ehlukile. Kuyefana nasendleleni amakhamera module ukuthi kuhlinzekwa ngaphandle ukubiyela igobolondo. Okungukuthi, leli thuluzi ingafakwa cishe kunoma iyiphi indawo ngaphandle ukukhathazeka mayelana isikhala esisele. Njengomthetho, lawa "amehlo" ezincane ngokwanele bafakwe niche uzilungiselele futhi ixhunywe ku-wiring. Ngokwengxenye amadivayisi Modular like mini-amakhamera lokukhuphula ezishaywayo, kodwa phakathi kwabo kukhona kanye onobuhle emikhulu ukusetshenziswa ongaphandle.
onobuhle rotary futhi kunendawo enkulu engahlolwa amarobhothi
Kulokhu, ibhekisela eqenjini ezibanzi amakhamera luyalawuleka, obizwa nangokuthi lens. Ngaphezu lens nomzimba, lezi onobuhle anemisila yokubukisa isisekelo mechanical ngoba fixing, okuvumela ukunyakaza. Empeleni, umsebenzisi angakwazi ukulawula noma eyodwa lens, ukuyivala noma lonke uhlelo umzimba. Kuphethwe izinhlobo okuqapha bese uphakamisa ukuthi kungenzeka ukunyakaza othomathikhi. Le divayisi kunendawo enkulu engahlolwa amarobhothi ukuthi ukushintsha engela nokubukela ancike izilungiselelo uhlelo ezikhethiwe. Ngokwesibonelo, umsebenzisi ungalungiselela ikhamera ukusebenza okubhekwe ukubuyekeza egcwele ensimini ngesikhathi ngesikhathi esithile futhi ngezikhathi ezithile. Ukungenela komuntu Eminye kungadingeki, njengoba imishini kuzoqashwa nenhlangano kwimodi okuzenzakalelayo.
Zonke izinhlobo amakhamera ziyahlukahluka ngombala ukugcwaliswa. Kukhona division eyisisekelo amamodeli ukunikeza omnyama nomhlophe isithombe, nombala. Kunengqondo ukuthi endabeni ebalulekile ezifana kubalulekile ukusebenzisa izinzuzo esiphezulu ividiyo, okungukuthi, kanye ukusakaza "umbala." Kodwa izinhlobo omnyama nomhlophe kwamakhamera enkabeni kunezimo. Ikakhulukazi, zinikeza ngokuningiliziwe, babe sensitivity high nangempumelelo isebenze emkhanyweni ophansi, kulekelelwa uma ukukhanya infrared. Kodwa lezi zinzuzo ungalukhanseli izinzuzo umbala amakhamera. Nazo ngokufanayo, ukusakaza ividiyo ngaphezulu ulwazi, okuvumela ukuba aqaphele imibala. Nedivaysi enjalo, isibonelo, ungakwazi ukunquma umbala imoto, izingubo, ngaphandle kwalokho, uzophelelwa ehilelekile ebalulekile impahla eqoshiwe.
izidingo Ukufakwa nemibandela Ukuqaphela yayo ngokuvamile zifaka umkhawulo kukhethwa amakhamera. Ezimweni ezinjalo, kuhle ukuhlola kungenzeka ngokusebenzisa omakhalekhukhwini. Le modeli, okuyinto ukusebenza kwentambo ukusakaza isignali ubuchwepheshe 3G Wi-Fi. Ngokwesibonelo, kungase kube ezinye izinhlobo kufihlwe okuqapha, kanye imishini yomgwaqo, okuyiwona ayikho indlela ngamafuphi ikhebula coaxial. Futhi, isigaba esisha ekuthuthukiseni amadivayisi wireless ukuvela ubuchwepheshe IP ezisekelwe ezenza ukudluliselwa inethiwekhi Inthanethi izinto. Noma kunjalo, ukukhishwa ephelele umbuzo izintambo, njengoba namadivayisi amaningi kudingeka supply amapayipi. Wenza okuhlukile kusengathiwa imodeli ezizimele, okuyinto ukunikezela senziwa isebenzisa ibhetri, kodwa izixazululo ezinjalo azisizi ngalutho ngoba zidinga esikhundleni njalo noma ngamandla webhethri.
Ububanzi intengo libanzi sebuningini izici kunqunywa. Ngokwesibonelo, i-miniature apharathasi Modular kungadla ecishe ibe yizinkulungwane 1-2. Hlikihla. Uhlelo mgwaqo emhlanganweni jikelele futhi nge izinga okusezingeni-amandla izindlu lingathengiswa for abayizinkulungwane 4-5. Hlikihla. Kufanele sicabangele uhlobo isignali, okusekelwa okuqapha. Izinhlobo namanani kule ingxenye eduze ezihlobene - ngokwesibonelo, i-analog Igumbi imodeli kuyinto nomkhiqizi elaziwayo elincane kungadla kungekho A amadivayisi angaphezu kuka 1 ayizinkulungwane digital ukufakwa ekhaya isivele ethengisiwe ruble ayizigidi 2-3 ... Okuningi kuxhomeke izinketho ezengeziwe. Ngakho, khona ukukhanya infrared, izihluzi casings kwagcizelela banganezela intengo eziyizinkulungwane ezimbalwa kuphela.
Ezimweni eziningi, ikhamera wenza iqoqo jikelele zokuphepha isici. izinhlobo Modern kwamakhamera enkabeni design yabo kanye nedatha ekuqaleni baqondiswe izimiso zokuhlanganisa kwelinye noma kwenye ohlelweni. Ngokwesibonelo, e-Ukuvikelwa ezindlini zithandwa ikhamera motion izinzwa. Futhi ukuze kuvikeleke izindawo ezinkulu ingasetshenziswa ngaphezulu amakhamera emgwaqweni ezihlanganiswe uhlelo eyodwa futhi uxhumeke kwi-central control panel. Zenza izinguquko zabo futhi ubuchwepheshe bamuva. Ngokwesibonelo, ukuthuthukiswa uvele ifomu amakhamera engenantambo ngenxa nezidingo ezikhona ukuze indlela mkhosi.
Igumbi in isitayela Minimalism: ifenisha, amakhethini, izibani
Ilitshe elihlaza okwesibhakabhaka ungumlusi nomusa
Indlela bangene amabutho ezikhethekile ngesikhathi Amathiphu ucingo
I Gulag uhlelo eU.SSR